Mutsva Wokudyara Musha: Zvimwe Zviri nyore NeKushanduka Kwakasiyana - Potatoes News
Mutsva wekudyara muchina: zvirinyore nekusiyana kwekudyara
Anselm Claassen muViethuizen (Gr.) Arikushandisa chirimwa chitsva mwaka uno mukudyara kwakasiyana kwechikamu chembeu yake. Akave achiedza neyakajairika yekudyara daro kwemakore akati wandei ikozvino.
Kubva muna2019, Claassen achagamuchira kutungamira kwenyanzvi seanotora chikamu cheNPPL. "Ndinoda kuongorora kukosha kwakawedzerwa kwekudyara kwakasiyanasiyana pane goho nekurongedza saizi", anodaro Claassen
Murimi anorima anofara kutaura nezve zvakanakira muridzi wake mutsva weGrimme ane cci1200 isobus control. "Chinhu chakakosha pamusoro peizvi ndechekuti isu tinogona kukunda kuverenga-mu task kadhi uye yakatarwa yekudyara nzvimbo mune cci1200 skrini. Izvi zvinoreva kuti tinogona kuenderera mberi nekugadziridza madaro ekudyara kubva kukadhi rebasa pacharo mumushini.
Nekudaro, kana zvichidikanwa, zvigadzirise kumusoro kana pasi neimwe muzana muzana kune avhareji yekudyara kureba. "Izvi zvinoshanda zviri nyore, nekuti ipapo hazvidiwe nguva dzese kuenda kupurazi ne USB stick kunogadzira kadhi rebasa idzva pakombuta yangu." Sekureva kwaClaassen, iwoyo mukana wakakura wemuchina mutsva uyu, asi haumire ipapo.
Yakanakisa kudyara daro
Uye zvakare, muchina mutsva wekudyara unogona ikozvino kuita yakakwana nzvimbo yekudyara pachinhu chimwe. “Muchina mutsva wekudyara unotara nzvimbo yekudyara yechinhu chimwe nechimwe. Neye mudyari wekare, ndipo paive paavhareji yezvinhu zvina. ”
Chinhu chega chega chinotungamirwa chakaparadzaniswa uye chinodzorwa zvakasiyana nekombuta, izvo zvinoita kuti zvinhu zvisarudze kureba kwekudyara zvakazvimiririra kune mumwe nemumwe. “Mushure memamita mashanu ega ega ekudyara, muchina unozviverengera wega wepakati pekudyara wozochinja kana zvichidikanwa. Icho chinhu chinotenderera nekukurumidza kana zvishoma zvishoma zvichienderana nesaizi yeiyo tubers. Izvi zvinoita kuti kudyara kwakasiyana kuve kwakanyatsonaka. ”
Usadyara pane zvikamu zvebindu
Nekadhi rebasa, muchina unogona zvakare kumisikidzwa nenzira yekuti chikamu hachina kudyarwa. “Semuenzaniso, hatina kudyara matombo kumatunhu matatu akasiyana. Nekuti SPNA yakaisa muedzo ipapo nenzvimbo dzakasiyana dzekudyara kuona mitemo yekuverenga yekudyara kwakasiyanasiyana kwembeu mbatatisi pavhu revhu. ”
Imwe bhenefiti ndeyekuti iyo nyowani nyowani yakagadzirirwa ne portal axles ayo anogona kutenderera makumi matatu nemashanu. Izvi zvinotibvumira kuti tidzokere panzira nekukurumidza uye zviri nyore, tisina kutyaira pamusoro zvisina basa. ”
Yakasiyana yekudyara mbatatisi
Ichi chishandiso chinoita kuti zvikwanise kugadzirisa kuwanda kwekudyara mukati mechikamu zvinoenderana nemepu pamusoro pekusiyana kwezviri mukati meivhu uye nenzvimbo yenzvimbo dzemumvuri nematramline evanosasa, pamwe chete nemitemo yekuverenga uye tekinoroji yemazuva ano yekudyara mbatatisi.
Nemazvo chikumbiro: Kudyara kwakasiyana-siyana kwembatatisi kune yakaringana uye yakatogadzirisirwa hunde, uye nekudaro kunyatso grading.
Tsika: kusiyanisa nzvimbo yekudyara zvichibva paivhu dhata kubva kuivhu revhu.
Mamiriro: prototype, pane ruzivo rwakakwana nemakumbo anoshanduka padhuze nemakwara ekupfira uye nzvimbo dzine mumvuri. Ongororo dzichiri kuitwa pamwe nekudyara daro rakavakirwa pane lutum kadhi.
Batsirwa nemurimi: inotarisirwa kuwedzera goho rinosvika ku5% nekuda kwekukura kwakaringana uye kusarudzika yunifomu. Mariro yehunyanzvi uye rutsigiro ingangoita € 30 kusvika € 40 pahekita pagore.
Zvakanakira zvakatipoteredza: zvakanaka. Kukura kwakakwana kunoreva kutora kwakakwana kwehutano.
Kudya kwekuchengetedza kuwana: zvakanaka. Wedzera mugoho uye hwakawanda hunhu hwakaenzana.
Kuita pachena: murimi anoratidza kuti mbishi dzake (mbatatisi yembeu) dzinoshandiswa nemazvo.
Bottleneck (s) yekutora: (1) kusaziva nezviitiko, (2) kudyara mari, mamiriro ekudyara kwakasarudzika paGPS mudyari unodzorwa nemagetsi, (3) makadhi emabasa haagone kuverenga nguva dzose mune software yemudyari. Fungidzira huwandu hwe € 15,000 yekuwedzera mari. Nekuderera mukati memakore mashanu uye 5 ha yemapatatisi, ndiwo ma100 mahekita / pagore. Ongororo yevhu inoita € 30 / ha.
mhinduro divi : varimi vanoda kushanda neichi chishandiso mune NPPL mamiriro vanozowana kudzidziswa mukushandisa uye rutsigiro panguva yekumisikidza mumwaka.
Nieuwe pootmachine: meer gemak yakasangana variabel poten
Tags: shatapurazi rembatatisikudyara mbatatisimhodzi dzemazamu
Dai 24, 2021
Homburg inogadzira sprayer yemasara mbatatisi
Dai 19, 2021
Rubatsiro nekusarudza kamwene pakudzivirirwa kwezvirimwa: Iyo "Spray Inobatsira" app inogona kuita izvi
Sarudzo yangu: 4-mutsara murimi ane injector
Colorado mbatata nyuchi iri kubuda kare uye muhuwandu hwakawanda